'रेसम फिरिरि...मा ब्रह्माण्डीय धुन' - अचानक - नेपाल
भारत, जापान, कोरिया, जर्मनलगायत विश्वका थुप्रै देशका भाषामा रेकर्डिङ भएको कीर्तिमानी नेपाली गीत हो, रेसम फिरिरि...। नेपाल-जर्मनीबीच दौत्य सम्बन्ध गाँसिएको ५० वर्ष अवसरमा जर्मनीको ४७ सदस्यीय स्टुटगार्ट च्याम्बर अर्केस्ट्राले यही गीत पस्कियो, राजधानीमा । वैश्विक बन्दै गएको गीतका मूल सर्जक बुद्धि परियारको नाम बिर्सिंदै गएपछि गायकसमेत रहेका उनका छोरा धर्मेन्द्र सेवान मूल सर्जक चिनाउने वृत्तचित्र बनाउन जुटेका छन् । उनीसँगको कुराकानी :
रेसम फिरिरि... गीतका सर्जक बुद्धि परियार हुन् भन्न डकुमेन्ट्री चाहिन्छ र ?
गीत प्रसिद्ध भएर पनि सर्जकलाई संसारले बिर्सिसकेछ । यसले मलाई दुःखी बनायो र गीति लेखनदेखि रेकर्डिङसम्मका सबै कुरा डकुमेन्ट्रीमार्फत संसारलाई देखाउने विचार आयो ।
कसरी सिर्जना भएछ गीत ?
बुबा ९ वर्षको छँदा उहाँका बाआमा बितिसक्नुभएछ । मावली सराङकोट जाँदा उकालोमा हिँड्दाहिँड्दै थाक्नुभएछ । र, भन्ज्याङमा बसेर कल्पिनुभएछ, पुतलीजस्तै माथिसम्म उडेर जान पाए ! गीत यति प्रसिद्ध भयो कि विदेशीले धरी रेकर्ड गरेर गाउने लहर आयो । तर संसारले गौरव गर्ने खास सर्जकलाई बिर्सिए ।
मूल सर्जक बिर्सने अवस्था कसरी आएको ठान्नुहुन्छ ?
पोखराको रत्न मन्दिरमा राजपरिवारको सवारी हुने भएपछि चेतन कार्कीले नृत्यका लागि बुबालाई लैजानुभएछ । बुबाको नृत्यकला देखेर राजपरिवारले काठमाडौँ ल्यायो । ०२९ मा रेसम फिरिरि... गीत सुन्दर श्रेष्ठ, सन्तोष बस्नेतसँग मिलेर रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ हुने भयो । बुबा होचो भएकाले रेकर्डिङ गर्दा माइकमा नपुगेपछि दुई जना अगाडि बसेछन् । बुबाले पछाडि उभिएर पाश्र्व स्वर मात्र दिनुभयो । त्यसपछि सधैँ पछाडि !
गायकको तुलनामा गीतकार ओझेल पर्नु सामान्य होइन र ?
हो, संगीतकार र गीतकार सिर्जनाका मूल हुन् भन्ने हरायो । पहिले त रेडियो नेपालले गीतकारको नाम पनि भन्थ्यो, अहिले त त्यो पनि छैन ।
यो राजा वीरेन्द्रको मन पर्ने गीत थियो, होइन ?
बुबा राजाको मन पर्ने कलाकार । राजारानीका हरेक रमाइलो कार्यक्रममा यो गीत बज्थ्यो । पहिले राजाहरुमा व्यक्तिको क्षमतालाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने गुण थियो । अहिले शासक वर्गबाट कलाको सम्मान गर्ने चलनै छैन ।
रेसम फिरिरि...मा के तागत छ त्यस्तो ?
यो गीत पदयात्रीबीच एकदमै प्रिय भयो । उनीहरुमार्फत विदेशीसम्म पुग्यो । सारंगी मात्र, मादल मात्र, बाँसुरी मात्र वा ताली मात्र बजाएर नाच्न र गाउन मिल्नु नै यसको शक्ति हो । यसमा ब्रह्माण्डीय धुन छ ।
ट्रेकिङ गर्नेहरुको मन पर्दो गीत किन भयो होला ?
उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ भन्ने शब्दले थाकेका बेला उडेर जान पाए कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भन्ने 'फिलिङ' सायद उनीहरुमा आयो र गीतमा आफ्नोपन भेटे ।
रेसम फिरिरि...एकातिर विश्वव्यापी छ, अर्कोतिर मूल सर्जकको चिनारी हराउँदै छ । दुःख लाग्छ कि खुसी ?
मूल सर्जक बिर्सिएको देख्दा पक्कै दुःख लाग्छ । तर कुनै न कुनै समयमा मानिसले असली सर्जक खोज्दो रहेछ । सत्य कहिल्यै लुक्दैन ।
बुद्धि परियारको जीवनचाहिँ कसरी बित्यो ?
बुबाले महेन्द्र पुलिस क्लबमा २२ वर्ष बिताउनुभयो । बुबालाई सात-सात पटक राजाले के बक्सिस चाहिन्छ भनेर सोध्दा पनि लिनुभएन । बुबाले जीवनलाई आफ्नै कमाइमा टिकाउनुभयो ।
प्रकाशित: वैशाख ६, २०७६
थप केही अचानक बाट
‘दाताको पैसाले विकास असम्भव’
मुलुकलाई पहिलो एसियाली स्वर्ण दिलाएका अजित यादव भन्छन्– 'एथ्लेटिक्स नै हो जिन्दगी'
कर्णालीको कुरा बजारमा लैजाँदा 'वाहवाह !' भने तर सिकेनन् – रंगकर्मी हीरा बिजुली
'महिनावारीलाई रोग लागेजस्तो ठान्दा रहेछन्'– प्रियंका कार्की
'चक्काको जमाना गएपछि गीत गाउन छुट्यो'
‘कलाक्षेत्रकै महँगो पुरस्कार’